I-Cervical Collar, i-Posture Corrector, i-Waist Trainer, i-Knee Brace - iShiheng Medical
Ezemidlalo ehlombe Brace Neoprene Nokunwebeka Beer ...
Kulula ukugqoka usayizi wamahhala wengalo indwayimane ephefumula kalula ...
Isikhumba Esisabekayo Sokuphefumula Kwabesifazane
Ukuphefumula Emuva Ukukhulelwa Kwesisu Isibopho Ibhande ...
I-Anping Shiheng Medical Instruments Co., Ltd. iyinkampani ekhethekile yezinsizakalo zezokwelapha nezemidlalo ezithengisa imishini yezokwelapha yokuvuselela nokuqina kwezemidlalo. Le nkampani inefektri yayo, ehlanganisa indawo engaphezulu kwamamitha-skwele ayi-12000, enama-workshops amane wokusebenza ochwepheshe kanye nabasebenzi abangaphezu kuka-200 abanolwazi lobuchwepheshe. futhi bahola abahlinzeki bezinsizakalo zamathambo enyakatho yeChina.
Ungayikhetha kanjani i-brace brace?
Okokuqala, ake sikhulume ngokuthi yini isibiyeli esinqunyiwe I-brace luhlobo lwe-brace olubekwe ngaphandle komzimba ukuvimbela ukunyakaza okuthile komzimba, ngaleyo ndlela kusize umphumela wokwelashwa okuhlinzekwayo, noma kusetshenziselwe ngqo ukulungiswa kwangaphandle kokwelapha okungahlinzeki. Ngasikhathi sinye, engeza ingcindezi poin ...
Ukusetshenziswa kwamathambo amadolo
Amadolo okhiye uhlobo lwezivuselelo zokuzivikela. Ukuze kuvikelwe iziguli ngemuva kokuhlinzwa emadolweni ukuthi zingafakwa kuplasta osindayo futhi ongena moya, ibhande lokuqinisa idolo lenzelwe iziguli ngemuva kokuhlinzwa ngokuhlangana kwamadolo. Engela adjustable idolo umkaki. Umugqa wokusekelwa kwamadolo ungowekati ...
Isigaxa somunwe sisetshenziselwa ukuvikela umunwe olimele. Umsebenzi wawo omkhulu ukugcina umunwe unganyakazi nokuvikela umunwe ekugoba. Ngaphezu kwalokho, kungasiza futhi umunwe ukuthi uphinde ululame ngemuva kwe-arthritis, ukuhlinzwa, ukuhlinzwa, njll, noma ezinye izizathu. . Imvuthuluka yomunwe wokufakelwa imvamisa ...
Sigxila kwikhwalithi yomkhiqizo